True OLF/ABO Leaders Will Never Surrender! “He that lies down with Dogs, shall rise up with fleas.” – Kichuu
”Warrikun gantummaan isaanii akkuma jirrutti tahee Hanga kana garuu gadi bu’oodha jedhee yaadee hinbeekunture.
– Poor Richard’s Almanack, 1733
Hayyuu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa qofa beekna .Erga yoomiitii Kora sabaa ABO piippiin waamuu jalqabdee? Waaqayyoo dulluma keessa nama hin busheessiin.
Speech to Federal Parliament concerning Oromo Ethiopian Community concern about political tensions in Ethiopia.
Isa tokko afaan qabaa,
Isa kaan muduun daba,
Kan siif sagadan kabajaa,
Kan si morman kabalaa,
Hanga yoomiitti jiraatta,
Akkas cubbuun maraatta?
Dhugaa Oromoo namuu,
Afaan qabee hin qoomu.
“Qurxummii balleessuuf bishaan balleessuu qabna” jedhe PP kuni. Hiikni isaa inni ifaan ABO balleessuun dura Oromoo balleessuu qabna jechuudha.
Kan ABO balleessina jedhe hunduu badee jira. Dargiin ABO balleessina jedhee Ziyaad Baarree wajjin hedduu carraaqe. Garuu ofumaaf bade. Wayyaaneenis ABO balleessuuf wanti ishiin hin godhin hin jiru ture garuu hin dandeenye.
Ammas ergamtoonni diinaa abjuu abboota isaanii abjootaa jiru. Kan kaleessaarraa osoo waa hin baratin jiru. ABO bira darbanii ummata Oromoo balleessina jechaa jiru. ABO n dhaaba lafee fi dhiigaan lafa Oromiyaa irratti dhaabbateedha. Yoomuu hin badu.
“Hanga namaa hin beektuu keessa qabattee namaaf laatti” jedhan. PP n hanga ofii wallaaltee Oromoo balleessina jechuun ishii of wallaaluudha.
Basaastuu qondaaltota ABO dabalatee sabboontota hedduu hiisifte kana irraa of eeggadhaa.
Maqaan ishee #Oromiyaa_Abduraman jedhamti Oromiyaa bahaatti dhalattee bakka jireenyaa ishee jijjiiramaa kan tahe yeroo tokko magaalaa Dukam yeroo tokko Bishooftuu fi yeroo ammaa magaalaa Finfinnee kan jiraattu yoo taatu sabboontuu dubartii kan quuqama qabdu fakkaattee gaazexeessitoota SBO dabalatee Qondaala Siyaaasaa ABO Jaal Gadaa Gabbisaa dubartii qabsiiftedha.
Akka ragaan arganne mul’isutti gazexeessitoota SBOtti dhiyyaachuun akka qabsooftuu fakkaattee hanga amana jireenyaa isaanii deemtutti waliin qooda wal barumsa guddaa uumuun dirqama baasaa ummata fudhatte erga xumurattee booda akka qabamanii mana jireenyaa isaanii fi odeessa funaante karaa ganticha Atoomsaa Kumsaa gabaasa gochuun akka hidhamaniif shoora ishee bahatteetti.
Gochaan kun ana irratti hin baramne kan jettee callisaan osoo hordofamaa jirtuu ammas Waadaa qarshii guddaa isheef galame sana harkatti galfachuuf Qondaala siyaasaa ABO Jaal Gadaa Gabbisaa akkaataa itti qabsiiftu buustee erga baastee xiinxaltee booda Qorannoo ishee baatii lamaa booda milkiin goolabattee Gadaa Gabbisaa qabsiifte.
Guyyaa jaala Gadaa Gabbisaa qabame leenjii dhimma Filannoo Biyyoolessa irratti Dhaabbata miti Mootummaa irraa leenji’ee osoo gara manaatti galuuf jedhuu Oromiyaa Abduraman gara Jaal Gadaatti konkolaataa keessa teessee isa dhokattee yeroo inni leenjii irraa bahu itti bilbiluun na dhukkubee kufee jira naannoo Birbirsa Gooroo(piassa) namni na qaqqabu dhibe as dhiyyoo yoo jiraatte maaloo mana yaalaa na geessi naman dhabe jettee itti bilbilatte.
Jaal Gadaa Gabbisaas Dhuguma sahee waan ittiin leenji’aniif ture barruulee baatu jaallan birootti kennachuun tax qabatee gara Birbirsa Gooroo isheen kufee jira jettetti imale. Oromiyaa Abduramanis konkolaataa biraan duuba isaa tax inni keessa jiru hordofaa humnoota tikaa waliin Birbirsa Gooroo geesse.
Yeroo Jaal Gadaan tax irraa bu’ee bilbiluuf bakka jirtu itti himtee booda lafatti kuftee akka tikoonni ishee waliin jiran sobanii ishee wal’aanan lafa kuftetti bishaan itti naqamtee godhattee lafarra nama gaggabe fakkaattee kufte.
Jaal Gada Gabbisaas yeroo bakka isheen jirtu gahu akkuma isheen himatte sana sahee gara mana yaalaatti akka deemtuuf lafa irraa ol kaasee gara tax yeroo imaluuf jedhu poolisootaan marfamee akka hin sochoone jedhamuun to’atame.
Haala kanan Qondaalli ABO Jaal Gadaa Gabbisaa qabamee mana hidhaa Buraayyuutti hidhame Oromiyaa Abduramanis erga Jaal Gadaan qabamee deemee kaatee konkolaataa seenuun hanga Buraayyuutti konkolaataa biraan tika waliin tahuun hanga mana hidhaatti waliin imaltee booda gara mana isheetti galte.
Basaastuu Oromiyaa Abduramaan akkanaan hoggantootaa fi miseensota ABO hiisiftee Har’a garee Hilton keessatti Shanee Gumii taatee filamte jechuun qaaniidha.
Oromiyaan nama barnoota illee hin qabne Miseensa dhaabaas hin turre deeggartuutti of waamti malee.
Barnootaan Oromiyaa Abduramanis kan loon hakiiman ykn veterinary baadiyyaa keessatti sertificate fudhattee akka tajaajilaa turte ragaan barnoota ishee ni ibsa.
Namoota hedduuf ani Dr looniiti jetti garuu isheen certificate gargaarsa namoota ykn Dr loonii ykn horii waliin hojjetteef kenname malee barnoota hin qabdu.
Dubartii kana irraa hedduu of qusadhaa seenaa ishee fi namoota isheen basaastee qabsiiste kan biroos qabadheen dhiyyaadha
Maqaan miseensota ABO HILTON,Tikni PP 48 kanneen armaan gadiiti. Qeerroo Intelligence Group eenyummaa isaanii (Suuraa,bilbila,gocha isaanii armaan duraa fi itti gaafatamummaa isaanii) funaanaa jira. Hedduun harka galfateera. Namootni eenyummaa jara kanaa itti dhiyeenyaan beektan profile isaanii keessaan akka nuuf ergitan kabajaan gaafachaa; kanneen maqaan keessan armaan gadiitti tuqamee fi kanneen haftan osoo hin beekiin shira kana keessatti kiyyeeffamtanis keessan akka nu quunnamtan isin gaafanna.
1. Araarsoo Biqilaa
2. Qajeelaa Mardaasaa
3. Ibsaa Nagawoo
4. Toleeraa Adabaa
5. Saafanoo Tulluu
6. Biraanuu Lammaa
7. Atoomsaa Kumsaa
8. Sintaayyoo Gadaa
9. Mootummaa Muummichaa
10. Oromiyaa Abdurhamaan
12. Galaanaa Nagaashii
13. Dabalaa Jimaa
15. Bilisummaa Alamaayyoo
17. Sanyii Abdiisaa
19. Abdiisaa Hirphaa
21. Utaloo Araarsoo
23. Abdiisaa Gammadaa
25. Muzayiir mohammed
27. Tolaa Nagaash
28. Shuumii Urgee
29. Miindaa Mangashaa
31. Biraanuu Nugusaa
35. Takilee Akkanaa
37. Gaaddisaa Abdii
39. Kaayyoo Dhugoo
41. Qixxeessaa Yaadataa
43. Diimaa Jiloo
45. Obsinee Abdallaa
47. Abdulaaxif Yusuuf
fi kanneen hafan muraasa dha.